Apply for Admin Staff (English4skills)Internal Audit Manager - Male / Female (3) PostsAccountant - မိန်းကလေး (2)ဦး (0Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
Admin Staff (English4skills)Internal Audit Manager - Male / Female (3) PostsAccountant - မိန်းကလေး (2)ဦး
🧐That Right Road Agency မှလျှောက်ထားရန်..
🧐🧐တပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်နိုင်မည့် Positions များဖြင့်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်.... 1. Admin Staff (English4skills)
- ယောကျာ်းလေး (2)ဦး
- အသက် (22-28)ကြား
- Computer (Internet & Email) ကျွမ်းကျင်
- English4skills ကျွမ်းကျင်
- သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (2)နှစ်နှင့်အထက်
- အလုပ်ချိန် (9:00 to 5:00)
(အလုံမြို့နယ်ရှိ Technology Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်) 2.Internal Audit Manager - Male / Female (3) Posts
- အသက် (30-40)ကြား
- ACCA / CPA အောင်မြင်ပြီးသူ
- သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (5) နှစ်နှင့်အထက်
- အလုပ်ချိန် (9:30 to 6:00)
(မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြိုနယ်ရှိ Trading & Logistic Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်) 3. Accountant - မိန်းကလေး (2)ဦး
- အသက် (28-35)ကြား
- LCCI Level (I,II,III)
- Computer (Word,excel)ကျွမ်းကျင်
- English ဘာသာစကား Communicate လုပ်နိုင်သူ
- Accountant ဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (3)နှစ်နှင့်အထက်
- အလုပ်ချိန်(8:00 to 5:00)
(တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Manufacturing Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်) 4. Senior Account - မိန်းကလေး (၃ )ဦး
- B.Com ဘွဲ့ရ (or) LCCI Level (I,II, III)
- MYOB software သုံးနိုင်သူ
- အသက်(၂၄ - ၃၅) ကြား
- Senior Account ဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(3)နှစ်
- အလုပ်ချိန် (9:00 to 6:00)
(အင်းစိန်မြို့နယ် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး Showroom တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်) 5. HR Manager - မိန်းကလေး (၂) ဦး
- အသက် ၃၅- ၄၅
- English4skills / Computer ကျွမ်းကျင်
- HR Diploma /Certificate ရရှိထားသူ
- management လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅)နှစ်
- MBA ဘွဲ့ရသူဦးစားပေး
- အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးပြခန်း(စော်ဘွားကြီးကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်)တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် 6. HR/Admin Manager - မိန်းကလေး (၂) ဦး
- အသက် ၃၅- ၄၅ ကြား
- သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၄)နှစ်
- အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးပြခန်း(စော်ဘွားကြီးကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်)တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် 7. Assistant HR Manager - မိန်းကလေး (၂) ဦး
- အသက် ၃၀- ၄၀
- management လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်
- အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးပြခန်း(စော်ဘွားကြီးကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်)တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် 8. HR & Admin Supervisor - မိန်းကလေး (၃)ဦင်္း
- အသက် ၂၅-၃၅ ကြား
- Computer (Word,Excel)
- သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်
- အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးပြခန်း(စော်ဘွားကြီးကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်)တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် 9. Architect Designer(Construction)
- အသက် (25-30)ကြား
- Auto CAD (2D, 3D Max, Rendering & Visualization, V-Ray & Rovit Software ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူ
- Architect Design ပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(3)နှစ်နှင့်အထက်
- (ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ Advertising Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်) 10.Graphic Designer(Advertising & Printing)
- ယောကျာ်းလေး (2) ဦး
- အသက် (20-28)ကြား
- Computer (Photo Shop & Illustrator)ကျွမ်းကျင်
- Graphic Design (Media & Printing)ပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ
(ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ Advertising Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်) 11.Client Service Assistant Manager ( Media & Advertising)
- ယောက်ျာလေး ၊ မိန်းကလေး (3)ဦး
- ဘွဲ့ရ / MBA ဘွဲ့ရရှိသူဦးစားပေး
- အသက် (25-35)ကြား
- Computer (Word,Excel,powerpoint)
- Media & Advertising Field တွင်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ
(ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ Advertising Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်) 12. Client Service Executive (Media & Event)
- မိန်းကလေး (2) ဦး
- Computer (Word,Excel & Powerpoint)
- Client Service Executive (Event) ပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ
(ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ Advertising Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်) စိတ်ဝင်စားပါက...
📩📩thatrightroadhr1@gmail.com, 🏚️🏠- အခန်း (၅၇၃)၊ သမိုင်း (၆)လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
(ဈေးဘူတာမှတ်တိုင် အနီး) 📲📲Viber ဖြင့် CV ပေးပို့လျှောက်ထားလိုပါက - 09- 972080220 📞📞ဖုန်းဖြင့်စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက - 09 972080220, 09 263126995, 09 788345957 သို့ 🕘🕔ရုံးချိန်အတွင်း(9:0...
အမည်: Admin Staff (English4skills)Internal Audit Manager - Male / Female (3) PostsAccountant - မိန်းကလေး (2)ဦး